Mootummaan US biyya qabatamaan lafarraa hin jirre—Wakaandaa michuu daldalaa godhate - BBC News Afaan Oromoo
Mootummaan US biyya qabatamaan lafarraa hin jirre—Wakaandaa michuu daldalaa godhate
Madda suuraa, Marvel/Disney
Wakaandaan biyya Afrikaa Bahaa barreessaan fiilmii uume qabatamaan hin jirredha
Ministeerri Qonnaa US biyya Wakaandaa jedhamtu kan dhugaatti lafarra hin jirre waliin michoomina daldala bilisaa tolfate.
Wakaandaan barreessaa fiilmiitiin akka biyya Afrikaa Bahaa keessa jirtu tokkootti kan uumamte taatullee Ministeerri Qonnaa Ameerikaa kun akka biyyoota michoota isaa waliin daldala bilisaa gaggeessan keessaa tokkootti tarreeffatee ture.
Akka fiilmii keessatti barreeffametti biyyi uumee barreessaa Wakaandaa jedhamtu kun mootii Bilaak Paanter jedhamuun bulti.
Ameerikaan garuu akka biyya dhugaa lafarra jirtu tokkootti tarree biyyoota michoota daldalaatti qabate.
Dubbi Himaan Ministeera Qonnaa akka jedhanitti biyyi sobaa Wakaandaa jedhamtu dogoggoraan akka tasaa yeroo hojjetaa qoraa jiranitti tarree biyyootaa keessa galte ture.
Kan nama ajaa'ibu ammoo marsariitiin Ministeera Qonnaa kun ibsa tokkoo tokkoo taarifa daldalaa biyyoota lamaanii- Wakaandaafi Ameerikaa gidduutti gaggeeffama jedhe akka daldala daakiyyee, harroota (baattuuwwan)fi horii aannanii dabalatee baaseera.
Haata'u malee, biyyi barreessaa fiilmiin uumame kun dogoggoraan tarree biyyoota michuuwwan daldalaa keessa galuun erga baramee booda akka ba'u ta'eera.
Badhaasa Faashinii bara 2019 suuraan
Taatonni kanfaltii olaanaa argatan kan bara kanaa eenyu fa'ii?
Kun kan barames gaaffii midiyaalee biraa dhiyaateen boodadha. Dhimmi kun erga baramees 'biyyoonni michuu ta'an lamaan waraana daldalaa jalqaban' jechuun itti qoosamaa jira.
Wakaandaan jalqaba kan dhiyaate bara 1966 keessa barruulee Fantastic Four jedhamu irratti yoo ta'u boodarra biyya Bilaak Paanter ta'uun bifa fiilmiin bara darbe qophaa'e ammoo sadarkaa badhaasa fiilmii guddicha Oscar mo'ateera.
Tarreeffamni biyya dhugaan lafarra hin jirre kanaa jalqaba kan argame ogeessa Injinaringii Sooftwaarii Niiwuu Yoork keessa jiraatu Firaansiis Tseng jedhamuun.
Namni kun osoo taariifa qonnaa irratti kan waliin hojjetu (fellowship) barbaadee iyyata galfachuuf jedhaa jiruudha.
Rooyitarsitti akka himetti yeroo jalqaba tarreeffama biyyoota michuu daldalaa keessatti Wakaandaa argu "akka isaa walallaale".
"Biyyan fiilmiirratti kanaan dura beekuun sirriitti yaadachuu dadhabemoo waan ta'e waliin wal na jalaa fakkaate jedheen yaade."
Erga tarreefama keessaa baafame booda ammoo Dubbi Himaan Ministeera Qonnaa Waashingteen Postitti akka dubbatetti Wakaadaa akka biyya michuu daldala bilisaatti tarreeffachuun kun yeroo hojjetaa qaccarrutti qormaata barumsaaf jecha kan keessa galedha malee akka ummataaf dhiyaatee faayidaarra ooluuf miti jedheera.
"Odeeffannoon waa'ee Wakaandaa erga qormaata sana raawwannee booda haqamuun irra ture; amma garuu haqameera," jedhe aanga'aan kun.
Erga biyya sobaa kana tarreeffama keessaa baasanii booda, rippoorterri Orlaandoo tokko akkas jedhee gaafate: "Amma daldala bilisaa Wakaandaa waliin ni qabnamoo hin qabnu? Dhimmi Agrabah waliin waliigalteerra ga'uudhaaf itti jiramu ammoo maalirra ga'e?"
Biyyu Agrabah jedhamtu kunis qabatamaa kan lafarra jitu osoo hin taane biyya/magaalaa uumee barreessaa fiilmiidha.
Biyyi uumee barreessaa (asoosama ykn fiilmii keessatti uumaman garuu dhugaan lafarra hin jirre) biyyoota dhugaa addunyaa kanarra jiran waliin tarreeffamuun kan jalqabaa miti.
Black Panther: Filmii namoonni gurraachi keessatti hirmaatan
Bara 2017 keessa Ministirri Dhimma Alaa Polaand yeroo sanaa Witold Waszczykowski yeroo rippoorterootatti dubbatan biyyi isaanii Polaand akka Mana Maree Nageenyaa UN'tti makamtuuf jecha bakka bu'oota biyyooya hedduu akka "Beliiz ykn Saan Eskoobar" waliin wal argineerra jedhan.
Garuu biyyi Beliiz jedhamtu dhugumaan kan jirtu yoo taatu biyyi Saan Eskoobar jedhamtu garuu biyya dhuguma lafarra jirtu miti.
Haaluma walfakkaatuun, aanga'oonni yeroo tokko tokko biyyoota dhugaatti lafarra jiran ni haqu.
Bara 2004 keessa fakkeenyaaf, kitaabni qajeelfama Gamtaa Awurooppaa danaa (map) isaarratti UK dabalatee biyyoota miseensota tarreessee Weelshiin garuu keessaa hambiseera.
Viidiyoo, Black Panther: Filmii namoonni gurraachi keessatti hirmaatan, Turtii 1,41
Suuraalee Badhaasa Faashinii 2019 Landanitti qophaa'e
Dubartootni lama taatota kaffaltii ol-aanoo argatan kudhan keessa galaniiru